Izinqolobane ze-Ego - Mytika Speak
Ikhaya / ukuzazisa
Umaka - Ego
Ngabe u-Ego unguNkulunkulu womhlaba obonakalayo?
U-Ego akakwazi ukusinda ngaphandle kokomoya, kanti okomoya akunanjongo ngaphandle kwe-Ego. Bobabili basebenza ngazwi linye. Le nyunyana inamandla amakhulu, kangangokuba ...
Iyini indima kaEgo ekufeni?
I-Ego yingxenye yomzimba neyomlingiswa, yanoma yisiphi isidalwa. Lapho ukufa sekuzokwenzeka, ingxenye yomlingiswa ka-Ego isebenza njengesithunywa phakathi kwenyama ...
Noma yini esusa ukwesaba nokungavikeleki ngenkathi inikeza induduzo ingumvuzo ku-Ego. I-Ego yakho iyakwazisa lapho unakekela izidingo zakho zomzimba. Ifuna ...
Ngabe i-Ego iyayithinta imizwa ngokuziqamba ngokwakho?
I-Ego yakho icacisiwe kakhulu ngokuthi ikubheka njengokuhle kanjani. Uma ungazizwa ukuthi uhlangabezana nalezo zinketho, kulula ukuba ...
U-Ego angalindela ukuthi abantu baphathane kanjani?
I-Ego yakho ingathanda ukuphathwa ngenhlonipho nokwamukelwa. Kanjalo, kungalindela ukuthi nawe uphathe abanye ngendlela efanayo. Elinye lamaqhinga ahlakaniphile u-Ego ...
Umuntu wazi kanjani ukuthi uqhutshwa u-Ego?
Ngokwazi isiQinisekiso Sakho Sangempela, uthola ikhono lokukala i-Ego yakho. Lokhu kukuvumela ukuthi ubone ukuthi yini okushayela. Ithonya lakho le-Ego empilweni yakho ...